Shacabka Kenya oo saakay u dareeray goobaha cod bixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaas – idalenews.com
Shacabka reer Kenya ayaa saaka u dareeray goobaha cod bixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaas, iyadoo dadka ay safaf dhaa dheer ugu jiraan inay cododkooda ka dhiibtaan, waxaana aad isha loogu hayaa doorashada guud ee maanta dhaceysa.
ilaa 14-milyan ayaa la diiwaan geliyay, kuwaasoo cododkooda dhiibanaya, sideed musharax ayaa isku haya tartanka musharaxnimada, waxaana ugu cad cad Ra’iisul Wasaaraha Kenya Raila Odinga iyo kuxigeenkiisa Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaanaya Mwai Kibaki ayaan ka qeyb galeyn doorashada, maadaama labo xilli uu isa soo sharaxay, sida uu qabo dastuurka dalkaas.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo ilaa 99-kun oo ciidan gaar ah loogu tala galay doorashada inay ammaankooda sugaan, waana doorashadii ugu muhiimsaneyd oo Kenya tan iyo markii xornimada ay qaateen 50-sano ka hor.
Sidoo kale doorashadan ayaa noqonaya tii u horeysay tan iyo markii Dastuur cusub la hirgeliyay, waxaana dadweynaha reer Kenya u leeyihiin hami aad u weyn.
Goobaha sanaadiiqda cod bixinta ayaa saaka la furay 6-dii aroornimo, waxaana ay soo xirmayaan 5-ta galabnimo.
Ciidamada Ammaanka ayaa sheegay inay heleen dad doonaya inay abuuraan qas iyo jahwareer, waxaana ay ku hanjabeen inay ka hor tagi doonaan.
Goobaha dadka ka codeynayaan ayaa waxaa ka mid ah Magaalada Nairobi, Mombasa, Gaarisa , halkaasoo meelo kala duwan la dhigay sanaadiiqda cod bixinta.
Weeraro dhimasho iyo dhaawac sababay oo xalay ka kala dhacay magaalooyinka Mombasa iyo Gaarisa